Fashion kryptek camouflage lamba - China Shaoxing Baite Textile
Army camouflage lamba
Tafika ala camouflage lamba
Army camouflage efitra lamba
Tafika lamba fotsy camouflage
Army snow camouflage lamba
Navy camouflage lamba
Tafika an-dranomasina ala camouflage lamba
Tafika an-dranomasina an-dranomasina camouflage lamba
Airforce camouflage lamba
Hery mitam-piadiana camouflage lamba
Mpiambina sisintany camouflage lamba
New Style camouflage lamba
Fanamiana & workwear lamba
Twill / fandavahana / Sateen lamba
Oxford / Cordura lamba
Poplin / lobaka lamba
An-tranomaizina fanamiana lamba
Miaramila / Polisy fanamiana
Camouflage fanamiana miaramila
Miltary fanamiana / palitao
Miaramila / Polisy Shirt
Miaramila / polisy pataloha
Polisy palitao / fanamiana
Miaramila Caps & Berets
Miaramila Boots / Shoes
Miaramila Tactical Bonnie satroka
Miaramila mainty hoditra kiraro
Army ady T-shirt
Ala ripstop camo Açu ady fanamiana miaramila
Pink ripstop camouflage lamba for Oman miaramila
Fashion kryptek camouflage lamba
US tafika fomba camouflage ala lamba
Camouflage ny lamba efa lasa ny safidy voalohany noho ny fanaovana fanamiana miaramila sy ny palitao isan-karazany firenena tafika. Afaka mitana anjara asa tsara ny camouflage sy hiaro ny fiarovana ny miaramila amin'ny ady.
Mifidy ny fitaovana avo lenta manta ny manenona ny lamba, miaraka Ripstop na Twill mihasimba mba hanatsarana ny tensile hamiravira hery sy tanjaky ny lamba. Ary mifidy ny tsara indrindra kalitaon'ny Dipserse / Vat dyestuff avo fahaizana ny fanaovana pirinty mba hiantoka ny lamba soa ny mampiraikitra ny loko.
Mba hanomezana izay ilain'ny samy hafa mpanjifa, azontsika atao ny manokana fikarakarana ny lamba miaraka amin'ny Anti-IR, tantera-drano, anti-menaka, Teflon, manohitra ny vovoka, Antistatic, afo retardant, Anti-moka, Antibacterial, Anti-fiketronana , sns.
Ny kalitao no kolontsaina. Ny manao raharaham-barotra eto amintsika, ny vola azo antoka.
Tonga soa eto amin'ny hifandray antsika tsy nisalasala!
Product karazana Fashion kryptek camouflage lamba
Product laharana Bt-244
Akora 65% polyester, 35% Cotton
kofehy fanisana 20 * 16
hakitroky 104 * 56
sakany 58 "/ 60"
Pattern kryptek camouflage
mampiraikitra ny loko 4 kilasy
Breaking hery Tenany: 600-1200N; Weft: 400-800N
MOQ 3000 Metatra
Ora nanomezana 15 -30 Days
Payment iombonana T / T na ny L / C
Previous: US tafika fomba camouflage ala lamba
Next: Multicam camouflage lamba for Georgia tafika
Anti-infrared ripstop camouflage lamba for Cze ...
Grika ala camouflage lamba
Blue camouflage lamba for Nepal polisy
NO.910-911, Caizhi hanorenana, Deartown, Shaoxing City, Zhejiang Province, Sina